Vaovao - Ahoana ny fisafidianana milina pelletizing mety?
Ahoana ny fomba hisafidianana milina pelletizing iray mety?
Ny vokatra plastika dia mitana andraikitra lehibe amin'ny sehatry ny famokarana indostrialy sy fambolena sy fiainana miaraka amin'ny fananany tena tsara toy ny lanja maivana, tanjaka avo, fanoherana ny harafo ary fanodinana mora. Saingy, noho ny fampielezana betsaka ny vokatra plastika, ny fanariana fako plastika dia nanjary olana sarotra, anisan'izany ny "sarotra hanambaniana voajanahary" dia nanjary olana mitohy izay mila vahana maika amin'ny fahalotoan'ny tontolo iainana manerantany.
Tao anatin'izay taona vitsy lasa izay, niaraka tamin'ny fampandrosoana haingana ny indostrian'ny plastika tanindrazako, ny indostrian'ny granulator plastika koa dia nivoatra haingana. Ny granulator dia afaka manamboatra vokatra plastika miverina ho plastika plastika amin'ny alàlan'ny dingana samihafa hahatratrarana ny vokatry ny fanodinana plastika. Ny indostrian'ny granulator dia mitaky faritra maro amin'ny toekarem-pirenena. Tsy rohy famokarana fototra tena ilaina amin'ny vokatra indostrialy sy fambolena marobe izy io, fa mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny famahana ny fandotoana plastika ao amin'ny fireneko, amin'ny fampitomboana ny taham-pamokarana vokatra plastika, ary ny fametrahana rafitra fanodinana plastika tonga lafatra. .
Ho an'ireo orinasa plastika namboarina dia tena zava-dehibe ny fomba fisafidianana pelletizer mety hampiasain'izy ireo manokana, satria tsy afaka mamokatra plastika rehetra ny plastika vita amin'ny plastika noho ny fanerena plastika sy ny faneriterena fitrandrahana samihafa. Ny granulator ankapobeny dia afaka mamerina sy mametaka plastika amin'ny fiainana andavanandro, fa toy ny plastika manokana sasany, toy ny plastika injeniera, polyethylene mifandray amin'ny hazo fijaliana, lamba voahodina, sns., Ny granatera manokana dia mila averina alamina sy voaangona. Noho izany, ny mpanamboatra dia tsy maintsy mijery ny karazana plastika ilain'izy ireo hamboarina rehefa mividy pelletizer ary avy eo misafidy pelletizer mety.
Ankoatr'izay, rehefa mividy granulator dia mila mitandrina ireto teboka manaraka ireto koa ianao:
Azavao ny tanjona sy ny tanjon'ny fividianana ny granulator. Amin'izao fotoana izao dia misy karazana mpanjifa telo izay mividy grenady eo an-tsena. Orinasa manokana na tsy miankina izy ireo no mampiasa vola. Ireo mpanamboatra plastika dia mividy granatera hamahana ny olan'ny sisa tavela amin'ny ozinina manokana. Avy eo misy ny mpaninjara sy ny orinasa mpivarotra. Ho an'ireo mpanjifa izay manomboka ny orinasany na orinasa tsy miankina aminy dia tsy maintsy manazava ny karazana plastika novokarin'ny orinasa izy ireo rehefa nividy pelletizer. Ny pelletizers ankapobeny dia tsy afaka mamerina sy mamokatra plastika misy tanjona amin'ny ankapobeny miorina amin'ny PP sy PE, izay akora plastika mahazatra ihany koa eo amin'ny tsenan'ny plastika. Somary kely ny tsenan'ny akora PS foam. Raha misy fantsom-pivarotana mazava ho an'ny plastika manokana, ny mpampiasa dia afaka mividy pelletizers mifanaraka aminy koa.
Ny fahombiazan'ny granulator. Ny granulator dia azo zaraina ho zana-tsokosoko tokana sy baolika kambana raha oharina amin'ny isan'ny visy. Rehefa miasa ny granulator tokana, ny plastika dia ampitaina miolakolaka ao anaty barika. Rehefa miasa ny granulator misy kambana, dia ampitaina amin'ny tsipika mahitsy ao anaty barika ny plastika. Araka ny fitsipika miasa, rehefa atsahatra ny masinina kambana, dia azo esorina amin'ny ankapobeny ny fitaovana ao amin'ilay masinina, ary ny milina tokana tokana dia afaka mitahiry fitaovana sisa tavela. Ny ankamaroan'ny plastika dia azo atao pelletized, ary ny volo tokana sy kambana dia azo ampiasaina tsy misy fanavahana.
Na izany aza, rehefa manamboatra plastika voaverina, noho ny haben'ny fiovan'ny bobongolo sy ny bika mora kokoa, ny milina tokana tokana dia mandaitra kokoa; rehefa manao plastika novaina, masterbatches loko, ary paompy miloko mifangaro, dia mitovy ny vokatry ny masinina roa. ; Rehefa manamboatra fibre fitaratra maharitra sy fantsom-pifandraisana ambanin'ny ranomasina, dia ireo granatera kambana ihany no azo ampiasaina. Ho fanampin'izay, amin'ny resaka vidin'ny fividianana milina sy ny vidin'ny famokarana taty aoriana, ambany kokoa ny fahafahan'ny granulateur tokana, raha misy fatiantoka lehibe kosa ny granulator kambana. Noho izany, rehefa mividy fitaovana dia ilaina ny misafidy ireo fitaovana mifanaraka amin'izany araky ny vokatra samihafa novokarin'ny orinasa.